မီးဖိုချောင်ခါးစညျးရှေ့ဖုံး မီးဖိုချောင်ထဲမှာအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအရာ, အမဲဆီ, ဖုန်ကနေစားပွဲထိပ်ကအထက်အာကာသကာကွယ်ပေးသောနံရံများပေါ်တွင်မူလဘန်ပါတောင်းဆိုခဲ့သည်။ မကြာခဏမီးဖိုချောင်ခါးစညျးရှေ့ဖုံးများအတွက်ထရံကိုကြွေပြားများ၏ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ တက်ကအခြားရွေးချယ်စရာ ဖန် , သဘာဝကျောက် MDF, mosaic ။
သငျသညျမီးဖိုချောင်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်မှုအလုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြုန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်သင်ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်ပင်အထူးအတှေ့အကွုံမရှိပဲ, အုပ်ကြွပ်၏တင်သောနှင့်အတူကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအကြံပြုချက်များတချို့၏အားသာချက်ယူရန်လိုအပ်ပေသည်။
ပထမဦးစွာကအုပ်ကြွပ်တွက်ချက်ခြင်းနှင့်ထို site မှာလိုအပ်မည်အကြောင်း, ခြေစွပ်နဲ့ switches များအတွက် layout ကိုလုပ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ တိုက်ရိုက်မြို့ရိုးပေါ်မှာ, သင်ခါးစညျးရှေ့ဖုံး၏အစအဦး၏အဆင့်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့အဖြစ်က mark နိုင်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်သင် tile ကိုဆင်းလျှောမပေးပါဘူးအရာဘား, တင်ထားရန်ရှိသည်။ ဒါဟာအသေကောင်များ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုစွဲစေရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, သငျသညျလမ်းညွှန်များသို့မဟုတ်ထိန်သိမ်းသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ မလွဲမသွေမပါဘဲ Next ကို Prime မြို့ရိုးကို။
Next ကိုအလုပ် styling ကိုစတင်ပါ။ ထိုအုတ်ရိုး၏မျက်နှာပြင်အဖြစ်ကော်, နှင့်အရှိဆုံးအုပ်ကြွပ် promazyvat သငျ့သညျ။ ထိုအုတ်ရိုးအင်္ဂတေသည်ဆိုပါက, tile က smear မလိုအပ်ပါဘူး။
အခုတော့အရေးယူအလားတူထုံးစံ၌နေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်းလက်ဝဲမှလက်ျာဘက်ထွက်သယ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ အခါအားလျော်စွာ, သင်မျက်နှာပြင်ဝိညာဉ်အဆင့်ကို အသုံးပြု. အဆင့်အထိကြောင်း verify ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တူညီတဲ့အသုတ်ထဲမှာပင်အုပ်ကြွပ်အရွယ်အစားဿုံတူညီမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုစိတ်ကိုထားပါ။ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမှမပြုလုပ်လျှင်ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားမှု၏နံရံတွင်အလွန်သိသာနိုင်ပါတယ်။ သင်ကောင်တာများနှင့်ပထမဦးဆုံးအတန်းအကြားအထူးပြင်ဆင်ပြီးသုံးထည့်သွင်းလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာချောမွေ့ပုံစံလိုင်းသေချာနှစ်မြှုပ်ခြင်းပြင်ဆင်ပြီးသုံး၏အတိမ်အနက်ကိုထိန်းညှိဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဒုတိယနှင့်နောက်ဆက်တွဲတန်းစီဘို့။
တစ်ဦးကနေ့ရက်ကိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်နှင့်မီးဖိုချောင်ခါးစညျးရှေ့ဖုံး၏ installation ၏အဆုံးပြီးနောက်, သငျသညျအပေါငျးတို့သလက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်ပြင်ဆင်ပြီးသုံးဆွဲထုတ်အဖြစ်ထိန်သိမ်းခြင်းနှင့်ရှိသမျှသောချုပ်ရိုးသုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
မီးဖိုချောင်များအတွက် MDF မျက်နှာစာ
နောက်ခံပုံများ Komar ကော်မထားဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
ကက်ဘိနက် Self-ကော်ရုပ်ရှင်ကျော် paste လုပ်ပါဘယ်လိုနေသလဲ?
အသေးစားဧည့်ခန်း - တစ်ပျူငှါနွေးထွေးသောပတ်ဝန်းကျင်ဒီဇိုင်းစိတ်ကူးများ
ချဉ် Plum - စာရွက်
ဖက်ရှင်အင်္ကျီ - Trends 2016
ကို Mickey Rourke တစ်ဆံပင်တုဝတ်ထား
Goulash ဟင်းချို - စာရွက်
ဘုရင်မကြီးအဲလိဇဘက်အကြောင်းကို 27 အံ့သြဖွယ်အချက်အလက်များ
အိတ်ဆောင်ဂိမ်း console က
Sneaker 2018 - ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း, အရောင်များ, လူကြိုက်အများဆုံးမော်ဒယ်များ